कुन बाटो आउँछ सुन ? खाडीबाट सिरहा हुँदै भारतसम्म - InHeadline
By Anu Rana on Jan 17,2019 - 11:39
शनिबार सिरहामा पोने २ किलो सुन तस्करीमा वडाध्यक्षसहित ६ जनालाई सशस्त्र प्रहरीले पक्राउ ग‍र्‍यो । तिमध्ये लहान नगरपालिका–१९ का मोहम्मद कैयुम र मोहम्मद अमिरुल अघिल्लो दिन मात्रै कतारबाट काठमाडौं आएका थिए । उनीहरुको साथबाट भेटिएको बिलमा हजरत अली, आस मोहम्मद, जागेश्वर मण्डल, हरीवंश मण्डल, मोहम्मद आसिफ, अमान्त हुसैन, समसुल मियाँ साथै पक्राउ पर्ने अमिरुल र कैयुमको पनि नाम छ ।
जसमध्ये आसिफको नाममा ५८३ ग्राम, समसुलको नाममा ५८३ ग्राम, अमान्तको नाममा २९१ ग्राम र बाँकी व्यक्तिका नाममा ५०५० ग्राम सुन खरिद गरेको बिलमा उल्लेख छ । तर बिलमा सुन खरिदकर्ताको नाम पक्राउ पर्ने अमिरुल र कैयुम बाहेक कसैको पनि मिल्दैन ।
६ जना पक्राउ परे पनि सुरुमा सशस्त्र प्रहरीले कैयुम, अमिरुल र रियाजलाई मात्रै सार्वजानिक गरेको थियो । जसमध्ये कैयुम र अमिरुल दुबैजना कतारबाट आएका थिए । उनीहरुले पत्रकार सम्मेलनमा आफूहरुको बिलसहित ५०५० ग्राम सुन मात्रै रहेको दाबी गरे । तर, उनीहरुले दिएको बिल केलाउँदा कतारबाट ती दुवैजना ९अमिरुल, कैयुम० ले नै सुन बोकेर ल्याएको देखिन्छ ।
सुन किन्ने पसल पनि एउटै
भारतीय रुपैयाँ सटही गर्दा सयकडा तीनदेखि ६ रुपैयाँ कमिसन आउँछ । सुन बिक्री गरेर दाम कमाउनुभन्दा पनि भारुबाट पाइने कमिसनका कारण केही व्यक्तिहरु भारतीय सहरमा सुन बिक्री गर्न रुचाउँछन् ।
ट्याग - कुन बाटो आउँछ सुन ? खाडीबाट सिरहा हुँदै भारतसम्म